I-KDE: wamukelekile kudeskithophu ye-semantic (ingxenye 4) | Kusuka kuLinux
Obani abalandele lolu chungechunge (ingxenye 1, ingxenye 2, ingxenye 3) izindatshana zibone okunye okungenziwa yi-KDE, lapho isebenzisa ideskithophu ye-semantic ngamandla ayo aphelele. Iqiniso ukuthi amandla we-KDE maningi, futhi ngeshwa kusenokuningi okufanele kwenziwe mayelana namapayipi akhombisa ukuqina okwandayo.
Bengifuna ukukushiya nendatshana yokuthi singayisebenzisa kanjani i-KDE emsebenzini, kepha ezinye izimbungulu ezingalindelekile kuhlobo 4.10.2 zingimisile okwamanje. Kukhona ama-patches asevele atholakala ku-Kubuntu noma kunjalo, futhi kufanele afike ezinsukwini ezimbalwa kumakhosombe e-Chakra. Esikhundleni salokho, ngizokushiya ngesitolimende esithile sokujabulisa, uma kungenjalo, sokuthi ungaphatha kanjani izingoma, izithombe, namavidiyo kwideskithophu ye-semantic.
1 Amafolda akhethekile
3 IPlasma Media Center
Engxenyeni 2 yalo mhlahlandlela sihlole amanye ama-KIOslaves wedeskithophu ye-semantic. Ngaphandle kwalawo ma-KIOslaves ama-4, i-KDE 4.10 ifake ezinye, ezikhawulelwe kakhulu, kepha ezisebenzayo futhi. Enye yazo ukusesha kwe-KIOslave: //, okusivumela ukuthi sikhiqize amafolda akhethekile. Ake sibheke lokhu ngokuningiliziwe.
Uyakhumbula ukuthi kuWindows bekukhona "amafolda akhethekile"? Ngaphansi kokuphatha "Abasebenzisi / Igama lomsebenzisi" kukhona, ku-Windows, "Imitapo yolwazi" equkethe umculo, amavidiyo, izithombe nemibhalo. Le mitapo yolwazi ihambelana nama-static amafolda, aphathwa yiWindows ngendlela ekhethekile, kepha empeleni awawona nje amasethi amafolda, anento ekhetheke kakhulu njengendawo lapho izinhlelo zokusebenza zeWindows 8 Metro zifuna khona imininingwane yazo.
Okuxakayo ngaleli cala ukuthi uhlelo lokuqala oluzama ukwenza ideskithophu ye-semantic laliyi-Windows ngqo, nephrojekthi yeLonghorn. Kulolo hlelo lokusebenza, amafolda e-Documents, Videos, Pictures and Music kwakufanele abe namandla, futhi azoqukatha wonke amafayela kukhompyutha. Imiqondo engemuva kweLonghorn, efana nohlelo lwefayela le-semantic olubizwa ngeWinFS, yayiseduze nesikhathi sabo futhi ukusebenza kwama-alphas okuqala kwakudabukisa, kangangoba kukhuthaze iMicrosoft ukukhipha abaphathi nokuhlubula iLonghorn. Izingcezu ezimbalwa ezisebenze ngemuva kokuyekiswa ukusebenza, ezingezwe kwikhodi entsha, bekuyisisekelo seWindows Vista.
Ku-KDE, ekugcineni sinalesi sici. Kwenziwe kahle, nangokusebenza okungaphezu kokumukelekile.
Le yindlela esinamafolda ama-4 ashukumisayo, akhona kubha yezindawo zeDolphin, futhi angamaKIOslaves futhi angasetshenziswa kanjalo.
- search: // imibhalo: Imibhalo
- Sesha: // izithombe: Izithombe
- sesha: // umsindo: Umculo
- sesha: // amavidiyo: Amavidiyo
Ukuthi ifolda inamandla akuyona into encane. Kusho ukuthi, noma imibhalo, amavidiyo, izithombe noma izingoma zisezikhaleni zefolda ekhonjwe yi-NEPOMUK, zizotholakala kulawa mafolda. Njengoba angamafolda akhethekile, umuntu angawasesha ngombhali, ngosayizi wesithombe. Umbukiso.
Bhekisisani. Ifolda yezithombe iqukethe, ngaphansi kwesithombe ngasinye, ubukhulu befayela ngalinye, ngamaphikseli. Okwamanje, ifolda yomsindo ayi-odwa ngegama, hhayi ngosuku, kodwa ngumculi, futhi ingoma ngayinye ikhombisa igama layo langempela nobude bayo. Lezi zintathu zingamafolda akhethekile, futhi njalo uma ulanda umsindo omusha, isithombe esisha, noma ividiyo entsha, zizozivuselela. Uma nje uNEPOMUK engababona.
Manje senzani ngalokhu? Izinhlelo eziningana ze-KDE sezivele zisebenzisa i-NEPOMUK kudathabheyisi yazo.
I-Amarok 2.7 ifake, ngokwesisekelo sokuhlola, isici esisha seSemantic Collection. Ngakho-ke, esikhundleni sokugcina i-database yayo, i-Amarok izosebenzisa i-NEPOMUK, isindisa inqwaba yememori kule nqubo. Kuyinto efana naleyo eyenziwe yiBangarang, uhlelo ngeshwa eyehlisa ijubane intuthuko yalo futhi inezinkinga ezinzima nge-KDE 4.10. Ukwenza lesi sici sisebenze kumele:
1. Khetha inketho Izintandokazi | Lungiselela i-Amarok.
2. Iya kuma-Complements bese wenza kusebenze i- «Nepomuk Collection».
Ngemuva kwalokho, i-Amarok izokhombisa iqoqo elihlukile, elibizwa nge- "Nepomuk Collection", nazo zonke izingoma ezikhonjiswe yi-Semantic Desktop. Le nketho inezinkinga ezithile njengamanje, kepha ngethemba ukuthi yonke into ihlelelwe i-Amarok 2.8.
IPlasma Media Center
Lolu hlelo, olukhiphe uhlobo lwalo lokuqala, luyamangalisa futhi ngicabanga ukuthi wonke umlandeli weSemantic Desktop kufanele abe nalo. Kubukeka kanjena.
Okusemuva yividiyo, edlalwa ngokusheshiswa kwe-OpenGL. Njengoba ukwazi ukubona, i-interface iqondile, futhi unezinketho ezimbili. Ungahlola ngendlela yendabuko, uphequlule kumafolda, noma ungacela iPlasma Media Center ukuthi isebenzise amaqoqo we-semantic ukukhombisa wonke amavidiyo, imisindo noma izithombe umuntu anazo. Yisebenzise. Uma ingakafiki ekusatshalalisweni kwakho, kubuze. KuChakra Linux ifakwe kanjena.
Asethembe ukuthi ukulungiswa kwe-bug kwe-KDE 4.10.2 kufinyelele ezinqolobaneni zawo wonke umuntu ukuze siqhubeke nalolu chungechunge. Jabulela i-Semantic Desktop kuze kube yileso sikhathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » I-KDE: wamukelekile kudeskithophu ye-semantic (ingxenye 4)
U-Ernesto Manriquez Mendoza kusho
Cha. Akunakwenzeka ukuchaza izihlungi ezingezinhle zamafolda ashukumisayo e-NEPOMUK, yize ngokwethiyori uhlelo lukwazi ukwenza njalo.
Phendula u-Ernesto Manriquez Mendoza
UNicolas Rull kusho
Kungenzeka yini kususwe ukuthi ifolda yezithombe ingaveli noma yamavidiyo?
Phendula uNicolas Rull
Izithombe zibheke phansi 😉
Eshu! Ilungisiwe. 🙂
I-HDMagazine # 6, iphume kuhhavini